Blockchain Izindaba 09.06.2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 09.06.2018
Iziphathimandla Korean kangitholi okungekho emthethweni e uphenyo Bithumb
Uphenyo exchange ngobukhulu e-South Korea, Bithumb iziphathimandla South Korean amaningi kwembula ukuthi kwakungekho ububi ngenxa yenkampani, naphezu sentela enkulu.
Bithumb manje has a intela ka 30 bhiliyoni iwine ukukhokha, okulingana cishe $28 abayizigidi ezingu.
A intela ukuthi big akumangalisi kakhulu, njengoba platform umangalela imali isilinganiso 0.3% ku cishe $250 million ngo ukuthengiselana ngosuku.
Uma Bithumb uyala lokhu kakhulu abathengisa, lokho kwakuyosho ukuthi inkampani yenza sibalo ngokumangalisayo cishe $750,000 ngosuku, okulingana cishe $274 million ngonyaka.
Amathegi: bitcoin, izindaba
Ontology Ukuqaliswa Ecosystem Accelerator - ontology Olympus Accelerator OOA
ontology, a new high-performance public multi-chain project and a distributed trust collaboration platform, wamemezela Ontology Olympus Accelerator (OOA).
Uhlelo umema ubuchwepheshe kanye umkhiqizo ochwepheshe yonkana emasimini ukuze uhlanganyele kwezamabhizinisi ukwakha izinhlelo zokusebenza ezintsha basakaza ibhizinisi esekelwe alandelayo uchungechunge zomphakathi nengqalasizinda ontology sika ukwakha evulekile-yomthombo, ukuba nomqondo ovulekile, futhi ngokubambisana basakaza ithemba ecosystem.
Uhlelo ontology Olympus Accelerator sizonikeza ephelele lobuchwepheshe, ukumaketha, uxhaso, ithalente, futhi zomthetho ukuhambisana ukweseka. I ontology Foundation ukutshala cishe 1.5 bhiliyoni USD worth of tokens, konke ezizosetshenziswa ukusekela ukuthuthukiswa ikusasa zokuqala ekhona futhi amaqembu ekhethiwe.
Norwegian Air CEO ukuqalisa exchange mfihlo
Billionaire Norwegian Air CEO Bjørn Kjos uqala exchange cryptocurrency okuthiwa Norwegian Block Exchange, futhi inothi ahlobene Norwegian Air manje amukela cryptocurrency njengoba lokukhokha.
Ngasekuqaleni, inkampani NBX Exchange, wayevuse $250,000 emzuliswaneni okwandisa imali.
I-CEO waqhubeka wathi "Sibheke izinto kulula sikala… kokuba cryptocurrency njengoba lokukhokha inketho yezindiza, Siyabona ukuthi kukhona isidingo esigcawini sina lapho ungakwazi ukuthenga futhi badayise cryptocurrencies. "
NBX has imigomo emikhulu nge umgomo rivaling Ukuhwebelana efana GDAX futhi Kraken
Kraken Daily Market Umbiko 08.06.2018
$88.8M adayiswa kuwo wonke ezimakethe namuhla
Ngubani John Hyman, noma yini esiyaziyo mayelana yocingo utshalomali umeluleki
imiyalezo ezibetheliwe ...
Korea Regulator kubikwa oda 12 cryptocurrency Ukuhwebelana kubuketa izivumelwano ikhasimende
corpor Korea ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 08.06.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 10.06.2018
Juni 13, 2018 ngesikhathi 5:16 PM